Vivinya i-Apple AirPods Pro: isivele ingaphezu kwamahedfoni - I-TANET RELAY
Accueil » I-TECH & ITELECOM Isivivinyo se-Apple's AirPods Pro: ngaphezu kwamahedfoni kuphela
I-Apple AirPods Pro mhlawumbe ingumkhiqizo ojabulisa kakhulu onyakeni.
Noma ngubani osechithe iminyaka eminingi ebuka, ehlaziya, egxeka, ephawula futhi ehlola ubuchwepheshe bungena ngasikhathi sinye kube uhlobo lokukhathala. Ama-revolutions awavamile, imikhiqizo iyafana futhi amaphrojekthi amakhulu kakhulu awathinti ababukeli bawo futhi agcina ewele ekuweni. Eqinisweni, izinto ozibona unamathele kuzo zimbalwa - ngoba kuthatha okungaphezu kokwenza kahle kwezobuchwepheshe ukudlula esigabeni semikhiqizo ngokwahlukana.
I-AirPods Pro bangabazo? Sicabanga kanjalo futhi sizamile ukuqonda ukuthi kungani, ngezinsuku eziyishumi, singeke sikwazi ukwenza ngaphandle kwale nto.
I-Apple's AirPods Pro ibiza i-279 € ngombala omhlophe (AmazonFnacApple)
Ukuqonda isidingo: umsindo wansuku zonke
Kungaba yinto ebeka i-Apple ngaphandle kwezimbangi zayo futhi kungenye yezimpawu lapho umkhiqizo uthokozelwa noma wenqatshwa. Ukucaciswa komkhiqizo akwenziwa nghlobo lwangempela kanye nemibono ehlobene nezimpawu zobuchwepheshe. Into ebonakalayo ngewashi: I-Apple ibona sengathi lezi zinto ezincane zidinga amandla ukufeza isipiliyoni esimnandi futhi kuthi noma kunjalo, sisusa amawashi ethu ebusuku - ithuba ukuyifaka kabusha. Abakhiqizi abamemezela ukuzimela okwenziwa phakathi nesonto kwemikhiqizo yabo banganikeli, namuhla, isiphuzo, isipiliyoni ashukumisayo nesisebenzayo usuku lonke.
Ama-AirPods asuselwa ngokomqondo kufilosofi efanayo: ukube i-Apple yayimile njengenani elingavuthiwe, enikeza amadivayisi avela ku-4h30 nebhethri le-5h bekungeke kube nomqondo, lapho kuboniswa ama-wireless engenantambo inqwaba yamahora okusebenzisa amamitha. Kepha manje, iCopertino ibheke ukusetshenziswa kwayo futhi yalenza laba ngumkhuba webhokisi elincane elincela ama-AirPods njalo lapho ubakhipha ezindlebeni. Sebenzisa? Ngokulandelanayo, ohambweni olude ngendiza noma ngesitimela (futhi, sithatha ikhefu ngisho nakulezinto zokuhamba), akuvamile ukuthi umuntu asebenzise isigqoko isikhathi eside njalo.
I-Apple AirPods Pro ebhokisini labo // Umthombo: ULouise Audry we-Numerama
Futhi kungukuthuthuka kule ndlela yokwakheka kwento ukuthi siyabona ukuthi konke ku-AirPods Pro, kuyahlangabezana ngqo nesidingo Nomad. Ngezeluleko zabo ezithambile ze-silicone ezingavimbi emaphethelweni anzima nohlelo lwabo lwe-aeration ukuze izindlebe zingafungi, i-AirPods Pro iyaphela ngokushesha lapho ibekwe endlebeni. Ifomu elihlongozwe yi-Apple, ngokumangazayo ekuqaleni, lilungele ukumangalisa izindlebe eziningi - lapho ama-AirPods ayevulelwe ukuphikisana.
Sisekupheleleni komkhiqizo wabathengi: ithiphu yakhelwe kahle futhi yahlanganiswa kahle kangangokuba kuthatha amasayizi amathathu kuphela ukumboza kahle izindlebe eziningi. Ukuze uqhathanise, Ama-headphone amahle kakhulu akwaSonyngaphandle kwezeluleko zabo ze-6, abakaze bakwazi ukungena ezindlebeni zethu kahle. Lapho zibamba cishe, zisongela ukuwa futhi amafomu ama-angular afika athinte ngaphandle kokujabulisa ezinye izingxenye zendlebe. Ngamafuphi, konke kuhamba kahle kunoma ngubani onezindlebe ezinhle, azinabo ubunye be-AirPods Pro.
Lesi yisizathu sokuqala sokuthi kungani amakhanda we-Apple abonakala efiseleka kakhulu: emizuzwini, futhi ngaphandle kokufaka noma yimuphi umculo, anikeza umuzwa wokududuzeka owaziwa ngokuba ngowokugcina - kube ngathi enzelwe thina futhi hhayi ngezigidi zamakhasimende we-Cupertino giant.
Kufakwe Ngokuphelele // Source: ULouise Audry we-Numerama
Imininingwane eyenza wonke umehluko
Ngemuva kwenduduzo, kuza inqubo. Uma amahedfoni ezingenantambo manje yimikhiqizo ebizayo (okungcono kakhulu ingehli ngaphansi kwe-250 €, noma ngabe Pro Powerbeats noma i-Sony WF-1000XM3), ngoba bathumela okokusebenza okuphelele kwe-Hardware ngaphandle kokucutshungulwa komsindo. U-Apple udlulele ekuhlaziyeni. Ngaphandle kokusho ngisho neprosesa elizinikezele, singabhala izinto ezincane ezenziwa kahle, ezithi, zigcine, zenze okuhlangenwe nakho okungalingani.
Akunasipuni seplastiki esiqinile esilimaza indlebe yakho // Umthombo: ULouise Audry we-Numerama
Ukukhetha Imodi. I-Apple ayihluphi izinga lokunciphisa futhi ikhetha ukungabi lula. Umsindo ungavinjelwa, ukhuliswe noma unciphise umsindo ungasebenzi. Uma icushiwe, umsindo omncane siphelelwe yisikhathi iza ukwenza inguquko phakathi komsindo nendawo yokuthula. Umbono olula wokuqhafaza osisiza ukusifaka ku-bubble futhi uphume kuwo.
Ukuncishiswa komsindo. Ihambisana nokuvinjezelwa kokuzwakalayo komsindo okuhlinzekwa izindlebe eziboshwe ngokuphelele, ngaphandle kobuhlungu, ezindlebeni, i-AirPods Pro inikeza ukuncipha komsindo oshukumisayo ikakhulukazi i-Bluffing. Sizwa sibili ukuthi umhlaba usuphela ngokusizungeza. Ukuthula akusoze kwaphela: sihlala sizwa izinto, kepha ngendlela elinyelwe nenomusa. Yiprosesa le-AirPods Pro elungisa ukuncishiswa kwe-200 umzuzwana ngamunye endlebeni ngayinye. Ngaphezu kwalokho, ukufeza isipiliyoni, i-Apple inikeza isivivinyo esincane somsindo okufanele siyenze ukuthola ukuthi ama-AirPods abolile yini. Lapho uSony ebuza ukuthi uthathe isithombe sendlebe yakho, u-Apple umane acindezele inkinobho yokudlala.
Noma iliphi ibhokisi elincane // Umthombo: ULouise Audry we-Numerama
Yokuhlanganisa. I-Apple idinga, konke kulula. Uvula icala phambi kwensiza ukuthi ibhangqwe bese kwenziwa: ungasebenzisa i-AirPods Pro. Noma yisiphi esinye isici sokubhanqa esikucela ukuthi uvule ibhukwana ukuze uthole inhlanganisela yokhiye wokucindezela imizuzwana eminingi kangaka kubonakala kukubuyisela emuva ku-Ages Ephakathi yezobuchwepheshe. Ukushintshela komunye umkhiqizo kuye komunye kulula futhi ... njengokufana nokwabelana ngokugeleza komsindo okufanayo kumabili amabili we-AirPods noma ama-Beats: kulusizo kakhulu ukubuka umbukiso nomuntu esitimeleni esikrinini esifanayo noma wabelane ngakho izingcezu ezimbili zomculo.
Ibhokisi. Uma usuyitholile i-hang it, i-AirPods Pro ifiphaza iqonde ku-notch yayo bese iwela esikhundleni esimiswe yi-Apple. Akunakwenzeka ukwenza iphutha. Ngaphezu kwalokho, incane impela kunaleyo yomncintiswano.
Izilawuli zamandla nokuqashelwa kokunyakaza. Ukulawulwa kwesiqu kungumbono omuhle: masinyane sibamba isandla sisuka kwimodi ethile siye kwesinye noma sime ingoma. Kuhle kakhulu ukuthi sisusa ama-AirPods Pro amancane kunama-AirPods: siya eTransparency ukuphendula ngokushesha uzakwethu. Lapho ufuna ngempela ukusika yonke into ngokushesha, ukususa ihedsethi kwanele ukubeka konke ikhefu.
Ngokungafani nama-AirPods, okungalimaza ekugcineni, futhi ekugcineni kuhlale kaningi, ama-AirPods Pro awahambanga neze ngezindlebe zethu - futhi asivamisile abalandeli bezakhiwo ze-intra, bakhetha amahedisethi endabuko. Lokhu kuwuphawu lokunamathiselwa okusheshayo umuntu akwenzayo kumkhiqizo nesibonakaliso esibonisa ukuthi kuphumelela kangakanani ukwenziwa. I-FIT ye-headphones: bekufanele siyisebenzise kaningi ngaphandle komculo kunasemculweni. Izingcingo, ezisizwa wukunciphiswa komsindo, ziyisibonelo se-crystalline futhi ababukeli bethu basizwa kahle.
Ngabe sizisola okuthile kulolu hlelo olushintsha ubuhlobo bethu nomsindo nsuku zonke? Yebo, ama-AirPods afanelwe imenyu yawo. Namuhla, ukuze uzilungiselele, iya kuzilungiselelo, i-Bluetooth bese ucindezela umbuthano omncane oseduze nedivaysi. Kubukeka njengokuhlanganiswa komkhiqizo omusha nesixhumi esibonakalayo esenziwe ngokweqile futhi esingakulungele ukwamukela. Ungasho ngisho nokuhambisana ne-Androidokunikeza nje ubuncane obungenalutho: ukubhanqanisa ama-headphones bese usebenzisa izilungiselelo ezilungiselelwe kudivayisi ye-iOS.
Isizinda esilawulwayo semvelo // Umthombo: ULouise Audry we-Numerama
Kuhlala kunzima ukunikeza umbono ngomkhiqizo olalelwayo, kakhulu umbono womculo uyinto evamile. Indlebe engaqaphile ngeke ibone umehluko phakathi kwesikali. Ngaphezu kwalokho, sibuyela embuzweni wokuqala: Ngabe sikudinga ngempela ukuthembeka okuphezulu kokulalela izingoma ezingacindezelwanga lapho, noma kunjalo, sihamba endaweni enomsindo egcwele ukungqubuzana?
Umgwaqo, ongaphansi komhlaba, ibhasi noma ezokuhamba isikhathi eside akuzona izikhala lapho umuntu angakwazi khona profiter umculo nezigqoko ezinhle kakhulu azikwazi ukwenza okuningi ngokumelene ne-hubbub ngemuva noma uphondo oluphazamisa i-symphony. Kungaleso sizathu-ke, uma sesikuzwisisile ukusetshenziswa kweningi kwalolu hlobo lomkhiqizo, singabheka kuphela njengoba basebenzisana nemvelo yabo. Ngeke uthole induduzo yegumbi lokuhlala, noma i-tube amp yakho noma izikhulumi zakho ze-5.1. Kepha ingabe yilokho esikufunayo? Akunjalo neze ne-AirPods Pro zikwazi kakhulu ukukhiqiza umsindo onamandla futhi uzivumelanise nokulalela kwakho.
Uhlu lwethu lokudlala bingee ngoba ukuhlolwa bekukulalela okwanelisa ngokwedlulele - kangangokuba siye sazigcina zonke ezinye izinto zethu zokulalela. Umsindo ongcolile, ocindezelwe wesikhathi se-Neil Young Hey Hey My My uzwakalisa ngokuphelele kukho konke ukungapheleli, ngamagiya asindayo nama-solos abukhali ngokuphelele. Izwi livela kahle ngaphezu kwalezi kugcwala. Igebe elikhulu elibheke Isikhathi Sokuhweba Esibi kwe-Weyes Igazi noma izwi lokuthinta lika-Alma Forrer Unyaka wolf ibulawa ngokuphelele, i-AirPods Pro ikhululekile ngokuphelele kwimisindo ye-electro esebenza ngayo, ivumele amathrekhi ahlukene aqhamuke ngaphandle kokubadida. Ukubheka okufanayo UJESU INKOSI kusuka Kanye West noma Arvoles ngu-Avishai Cohen: Ama-AirPods awakaze abonakale enza kakhulu imvamisa eyodwa, imicu ephindwe kabili yama-bass evunyelwe ivangeli likaJeezy.
Kungenzeka kube yinsimbi ethile yezimboni lapho i-AirPods Pro ibonakala ngathi ayimnandi kangako - kepha umbono uhlala unamaqhinga. I-Rammstein yokugcina ayikwazi ukuba nkulu, kube sengathi ukucindezela kwayo ku-Apple Music kukhashelwe ngabakwa-headset ngegama ngalinye. Kwesinye isikhathi sicabanga eminyakeni eyi-2000 ukulalela i-MP3 embi elandwe kuKazaa. Ukuqashelwa okufanayo, noma kukhulunywa kancane, kwi-Slipknot yokugcina, Asisilo Uhlobo Lakho. Futhi: sikhuluma ngokulalelisisa ukulalela ukuthola isahlulelo. Mhlawumbe sasingadumazeka kangako ekusebenziseni kwangempela, kwezokuhamba noma ehhovisi.
Ngokusobala, into encane kunazo zonke ye-Apple mhlawumbe, ekupheleni konyaka, umkhiqizo wayo omkhulu.
Qaphela: 5 / 5
I-AirPods Pro ingenye yezinto ephumelela kakhulu kwezobuchwepheshe zokuphela konyaka. Ngemuva kokudumisa ifomethi ye-wireless earphone ngama-AirPods, i-Apple izuza ngeminyaka engu-3 yamava ukuthatha isinyathelo esikhulu kakhulu ngaphambi komncintiswano.
Ikhangisiwe ngaphandle kwengqungquthela, i-AirPods Pro isheshe yabaluleka kakhulu ezimpilweni zethu zansuku zonke: ngezinsuku eziyishumi kuphela zokuhlola, sizwa sengathi sinomkhiqizo ogxile emikhubeni yethu futhi siphendula izidingo zethu ngendlela ebukeka ngathi. ngihambisane neshumi. Futhi lokhu, ngomculo noma ngaphandle komculo.
I-Ergonomics nedizayini ephelele
Kuhle ngaphandle komculo
Ukunciphiswa komsindo o-Smart
Eduze kwe-Apple ecosystem
Ukulungiselela okuthuthukile kunzima ukufinyelela
Kwimodi ye-Transparency, abantu abazi ukuthi uyabezwa
ULouise Audry we-Numerama
Lesi sihloko sivele kuqala https://www.numerama.com/tech/567920-test-des-airpods-pro-dapple-deja-bien-plus-que-des-ecouteurs.html#utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=567920
I-YouTube izokuvumela ukuthi uphume iziteshi ongasafuni ukuzibona kusiphakamiso
Kwenzekani kulabo abasolwa ngokuhlaselwa kukaDkt Koumou esibhedlela sase-Efoulan?
Ngokushesha ukudlala ukushaya kwakhe e-AMA ngemuva kwakho konke - abantu
I-SpaceX's satellite horde iyinkinga yobusuku bezazi zezinkanyezi - BGR
Ababhalisile abasha bangathola izinyanga ze-3 zamahhala - BGR
Susa ifayela noma ifolda - Izeluleko
ABANTU & LIFESTYLE7,724